DR တို့နှင့် ကျန်းမာရေးအသိကြွယ်ဝသူတို့ခင်ဗျား ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » DR တို့နှင့် ကျန်းမာရေးအသိကြွယ်ဝသူတို့ခင်ဗျား …..
DR တို့နှင့် ကျန်းမာရေးအသိကြွယ်ဝသူတို့ခင်ဗျား …..
Posted by fatty on Nov 15, 2010 in News | 12 comments
just open and close
ဆရာဝန်များ သုံးနှုန်းနေသော … O/C ( just open and close ) ဆိုသော အဓိပ္ပါယ်ကိုသိပါရစေ။ ကျနော်နားလည်သလောက်ကတော့ ဆရာဝန်များ၏ လူနာများ မသိစေချင်သော အသုံးအနှုန်းတခုဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါသလား …။
ဒီမေးခွန်း ဆူးနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး.. ဦးလေးဝတုတ် ပိုစ်မှာ ဖတ်သွားတဲ့ လူတွေ တွေ့အောင် ကွန်မန်းပေးခဲ့တယ်။
ပြောရရင်.. အမာခံ ကြံဖွတ် ပရိတ်သတ်ပါ ဆိုတဲ့ ပိုစ် ရဲ့ ပုံမှာပါတဲ့ ဓါတ်ပုံ တည်ရာဝန်းကျင်က အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး နိုင်ငံခြားပို့ အကြော်ဆိုင်က ကြွတ်ကြွတ် အိတ်တွေ ထည့်ကြော်တယ်လို့ သတင်းကြားတယ် မြင်တဲ့လူကတော့ အခန့်မသင့်လို့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် လေနဲ့ လွင့်ပြီး ကျသွားတယ် ထင်နေတာ.. နောက်မှ ဂျာနယ်ဖတ်ပြီး သိသွားလို့.. တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုဘဲ.. မသိမသာ ကြွတ်ကြွတ် အိတ် တအိတ်ထည့် တအိတ်ထည့် လုပ်နေသလား မသိဘူး။ ပြောရရင် သူများ စီးပွားပျက်အောင် လုပ်တယ် ဖြစ်အုန်းမယ်။ အရိပ်အမြွက် ပြောလိုက်သည်။ အဲဒီ အကြော်ဆိုင်က အကြော် ပဲကြော် တော်တော် နာမည်ကြီးတယ် ၃ – ၄ ရက် ထားလည်း မပျော့ဘူး လေသလပ် ခံတယ်။
just open and close ………
မသေမချာ မစူးမစမ်း လုပ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ရှိနေလို့ အဲဒိလို ဖွင့်ပြီး ပြန်ပိတ်လိုက်ရတာ.. အသိ တယောက်ဆိုရင် သူ့အဖေက အသက်ကြီးလို့ ဦးနှောက် အရည်အိတ် ခမ်းပြီး လမ်းမလျောက်နိုင်တာ ခါးကျီးပေါင်းဆိုပြီး ခွဲလိုက်တာ.. ဖွင့်ပြီး ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်.. မခွဲခင်တုန်းကတော့ ခွဲပြီး အရိုးတွေ တစစီ ဖြုတ်တပ်မှာ မို့ နေ့ဝက်လောက်ကြမယ် ၁၀နာရီလောက် ကြာမယ်နဲ့.. ၃နာရီကြာတော့ ပြန်ထွက်လာတယ်.. သေချာအောင် ခါးရိုးဖဲ့ကြည့်လိုက်လို့ တသက်လုံး သေတဲ့ အထိ လမ်းတောင် မလျောက်နိုင်တော့ဘူး။ တချိန်က အရိုးဆေးရုံ အုပ်ကြီး လုပ်တဲ့ ဆရာဝန်ပေါ့။ ကာယကံရှင်တွေကို မှားမိတယ်လို့ မ၀န်ခံ ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ထားပြိး လှည့်တောင် လာပြန်မကြည့်ဘူး.. မှားလည်း မှားသေးတယ် မှားတဲ့ အကြောင်းလည်း ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဖြစ်နေလို့ ဘယ်သူမှ အသံမထွက်ရဲဘူး အားလုံးသော ဆရာဝန်လေးတွေက အသံမထွက်ရဲသလို လာတောင် မကြည့်ရတော့ လူနာကလည်း ဖြစ် အားလုံး တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေက ၀ိုင်းပါယ်ထားသလို ခံစားနေသွားရတာပေါ့။ သူတို့မိသားစု နောက်ဆုံး သေခါနီးမှ.. နိုင်ငံခြားက ဆေးရုံတခုကို မှတ်တမ်းတွေ ပို့ပြီး မေးကြည့်တော့.. အဲဒါ မခွဲရဘူး. မလိုဘဲ လုပ်မိလို့ တသက်လုံး အောက်ပိုင်းသေသွားတာတဲ့.. နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာမှ သိတယ်။ နိုင်ငံခြားဆေးရုံမှာ သွားကုမယ် ဆိုတော့.. ရောဂါက ကျွှမ်းနေလို့ မသွားနိုင်တော့ဘူး သွားခါနီးမှာ သေသွားရှာတယ်။ ကံပဲလို့ တွေးရမှာပေါ့..
O/C လုပ်ပြီးသေသွားတာဘဲ ဒါကြောင့် o/c ကိုသိနေတယ်
2009 အောက်တိုဘာလ 27 ရက် နေ့လည်ခန့်(နာရီမကြည့်မိ) က အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာကျွန်တော်ဆေးရုံတက်ရစဉ် ဘေးကလူနာ(၂ ယောက်ခန်းဖြစ်သဖြင့်)ကို အသည်းအထူးသမားတော်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်း ပြောနေသောစကားများကိုပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်..
အသံ=ပေ ၄၀ အကွာမှကောင်းစွာကြားနိင်
ဆရာ-မင်းဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကကင်ဆာလို့ခေါ်တယ် ခွဲစိတ်ရမယ် မခွဲရင်မင်းမကြာခင်သေမယ် သေတာတောင်သွေးအန်ပြီးသေမယ် နာမယ် အောင့်မယ် အသေဆိုးနဲ့သေမယ် မခွဲစိတ်ဘဲကုန်ကျမဲ့ငွေကိုမင်းသေပြီးမုဇရပ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လဲသဘောဘဲ..
ဆ၇ာဝန်တွေပြေးစ၇ာမြေမကျန်တော့ပါလား..က၇ို့။ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးသွားလာေ၇းအဆင်မပြေတဲ့ဒေသတွေမှာအများအားဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေး၇မဲ့ကိ၇ိယာမ၇ှိတော့၊ တခါတ၇ံစွံ့စားလုပ်၇တဲ့အချိန်အခါလေးတွေ၇ှိတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ-physical လုပ်ကြည့်တော့သာမာန် tumor လို့ထင်ပြီး၊ ဖွင့်ကြည့်ခါမှ၊ malignant ကင်ဆာဖြစ်နေမှန်းသိ၇တဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့။
short general anesthesia (Thiopentone) ပေးပြီး၊၂လက်မခွဲလောက်ဗိုက်ဖွင့်ကြည့်ပြီးလက်နှစ်ချောင်းထဲ့ပြီးဝိုက်ကြည့်လိုက်၇င်အဖြေထွက်တတ်ပါတယ်။
ကျနော်ထင်တာထက်တောင် ဒီမှာ post ရေးတင်နေကြသူများဟာ အင်မတန်ထက်မျက်ကြပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ဝမ်းသာတယ်။ မြန်မာတွေတော်ကြတယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ ဟိုတုန်းက အခုခေတ်လို scan
မျိုးစုံဖတ်တာမရှိသေးပါဘူး။ အပြင်ကရောဂါလက္ခဏာကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလို့မရတော့ ဗိုက်ဖွင့်လိုက်တာပါ။
ဖွင့်ကြည့်ပြီးမှ ဘာမှမဖြစ်ဘူး လေထိုးလေအောင့်တာဆိုတာသိသွားလို့ ပြန်ပိတ်လိုက်၇တာကို O/C လို့ခေါ်တာပါ။ ကျနော်နှပ်ကြောင်းပေးတာတော့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ … အများသိစေချင်လို့ မေးခွန်းလုပ်ပြီးတင်လိုက်တာပါ။ …။
ဆူး ကလည်း အရင်လို ထက်ထက်မျက်မျက်ဘဲ …။ unclegyi ကလည်း တကယ်မြင်တတ်ပါတယ်။ မှီလိုမှီငြားလုပ်ရတာလဲရှိပါတယ်။ အသည်းဆရာဝန်ကတော့ ကျနော်အသည်းေ၇ာင်တာ သိပ်မခံတော့ဘူးပြောခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ ကျော်ကပါ။
ဦးလေး ၀တုတ် အသည်းရောဂါ ဖြစ်နေရင်တော့ မြန်မာ ဆေး ဆရာ မိုးကုတ် ဦးကျော်စိန် ကို သွားပြလိုက်ပါ။ ဆူး သိတဲ့ လူတွေ တော်တော် များများ ကောင်းသွားတာ မြင်ဘူးတယ်။ ဆူး မိသားစုထဲမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ လူရှိဘူးတော့.. မြန်မာဆေး နိုင်ငံခြားဆေး နည်းမျိုးစုံနဲ့ သောက်သောက်လဲ ငွေကုန်ဘူးတယ်။ ကာယကံ ရှင် လူနာနဲ့တကွ မိသားစု ဖြစ်တဲ့ ဆူးလည်း တော်တော် ပင်ပန်းခဲ့တယ်။ စိတ်မော လူမော ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေ.. ညမအိပ်ရဘဲ အရိပ်တကြည့်ကြည့် ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ အများကြီး ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရဘူးတယ်။ စေတနာ အရင်းခံပြီး ကုပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဆရာဝန်လေးတွေ လည်း အများကြီး ကြုံဘူးတယ်။ လေဖြတ်လို့ လမ်းမလျောက်နိင်တဲ့ လူတချို့.. မြန်မာ တိုင်းရင်း ဆေးနည်းနဲ့ ကုလို့ လမ်းပြန်လျောက်နိုင်တာလည်း မြင်ဘူးပါတယ်။ သိတော့ သိတယ်.. သိသမျှတော့ အကုန် ချမရေးချင်ဘူး။ ကြုံကြိုက်ရင် သိတာလေးတွေ ထပ်ပြီး ၀င်ပြောပါအုန်းမယ်။
လည်လွန်းတဲ့ဘီး ဘာသင့်ဆိုသလိုဖြစ်နေပါပြီ ။
နာမည်ကြီး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးတွေ ၊ နိုင်ငံခြားပြန်ဆရာဝန်ကြီးတွေက ဆေးခန်းတွေမှာ နာမည်တွေသာ ထိုးထားတာ လာတစ်ရက်မလာတစ်ရက်နဲ့ ပြီးတော့ သူတို့လက်ထောက်တွေနဲ့လွှဲထားတယ် ။ ရောဂါက တော်တော်လေး serious ဖြစ်တော့မှပဲသူတို့က ၀င်ကိုင်တာ ။ အတွေ့ကြုံကများပြီဆိုတော့ ဆေးစကုတုန်းကလို သိပ်အလေးမထားချင်တော့ဘူး …။ ဒါနဲ့ ပဲ….. မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်တာ ပါ ။ ဆရာဝန်တွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ မှားရင် လူနာအသက်ကို စတေးလိုက်ရတာ ကြေကွဲဖို့ကောင်းတယ် ။
မဆူးရေ ညီမအဖေလည်းအဲ့လို ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားရတာလေ။ဖေဖေက ဆီးချို ဖြစ်ပြီးအာရုံကြောအားနည်းတာ အဲ့ဒါအတွက် ခြေမနိုင်လက်မနိုင်ဖြစ်တာ လေ။အဲ့ဒါကို ခါးရိုးဆစ်ထဲကခြင်ဆီထုတ်ပြီး စစ်ကြတယ်လေ။ ဆီးချိုဆရာဝန်ကြီးနဲ့အာရုံကြောအထူးကုဆရာဝန်မကြီး နှစ်ဦးစကားတောင် များကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ အဲ့လိုလည်းဆေးရုံတက်ပြီး ပြန်လာရော လမ်းကိုမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။မလိုအပ်ပဲ ခြင်ဆီထုတ်မိလို့ပြောကြတယ် ။ နှောင်းသွားပြီလေ …. ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်မကောင်းဘူး။
အမှန်တော့ လူတွေက ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လိုဘဲ ဘာညာ ထပြောရင် ဆရာဝန်တွေက ထပြီး ကန့်ကွက်ကြတယ်.. ဆရာဝန်ဆိုတာ စိတ်ကောင်းရှိတယ်။ ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ပြောရအောင်လည်း သူတို့ အသုံးအနှုန်းနဲ့.. သူတို့ အပြောတွေကို လွန်ဆန်နိုင်အောင် မပြောနိုင်ကြဘူး.. ခံလိုက်ရတဲ့ လူကတော့ ခံလိုက်ရတာ အမှန်ဘဲ.. ခံရကြောင်း စကားနှာ မထိုးနိုင်လောက်အောင်ကို အသုံးအနှုန်းနဲ့ ဖိထားတော့.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ.. လက်ဆိုတာ အတိုအရှည် ရှိနေတော့ လူတိုင်းတော့ ပကတိ ဆင်းလုံးချော မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိတယ်။ လောကကြီးထဲမှာ လူတိုင်းက လူကောင်းကြီးဘဲ မဟုတ်သလို လူဆိုးကြီးဘဲ လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဆရာဝန်တိုင်း စေတနာ ဆရာဝန် မဟုတ်သလို ဆရာဝန်တိုင်း အသပြာ ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။ လူဆိုးကိုတော့ လူဆိုး.. လူကောင်းကိုတော့ လူကောင်းလို့ ခွဲခြား သတ်မှတ် ပိုင်ခွင့် လူတိုင်းမှာ ရှိသင့်တယ်လေ။ အားလုံးကိုတော့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံး မရမ်းသင့်ပေမဲ့.. ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးပြီး ငါတို့မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ရိုက်ထုတ်တာ လည်း မခံသင့်ပါဘူး။ လူလောကမှာ လူနဲ့ တူတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လူသားဆန်တဲ့ စကားတွေ ပြောပိုင်ခွင့်.. ရှိသင့်တယ်။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာဒီနေ့အထိဆ၇ာဝန်ဘွဲ့ယူကြသူတိုင်း..Hippocrates ကျမ်းကိုကျိန်ဆိုကြ၇ပါတယ်။ ဂီလာနဆောင်ဝေဒနာ၇ှင်အပေါင်းကိုလူမျိုးဘာသာကျားမနဲ့အခြေအနေမေ၇ွးကိုယ်တတ်စွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြုစုစောင့်ေ၇ှာက်ဖို့ဟာ…သမားတိုင်းမှာတာဝန်၇ှိကြပါတယ်။ ဆ၇ာဝန်တွေလဲလူသားတွေမို့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ကိုဖြတ်ကြ၇သူတွေဖြစတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါစစ်ဆေးကုသပေးလိုက်တာဟာကိုယ်ကုသ၇တဲ့လူနာအတွက်အကျိုး၇ှိပျောက်ကင်းပါ့မလားဆိုတဲ့…မေးခွန်းကို…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနဲဆုံး(၂)ခါပြန်မေးကြဘို့…အကြံပြုပါ၇စေ။
ဆ၇ာဝန်ဆိုတာ..နေ၇င်းထိုင်၇င်းကုသိုလ်၇နေတဲ့ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပါ…။ လူနာလုပ်တဲ့သူဟာကိုယ့်အပေါ် (ဆ၇ာဝန်အပေါ်) ဘယ်လောက်အားကိုးလဲဆိုတာ..ကိုယ်တိုင်လူနာဖြစ်မှခံစားမိကြမှာပါ..။ ဆ၇ာဝန်၇ဲ့စကားတခွန်းဟာလူနာ၇ဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ကျန်းမာေ၇းကိုတမဟုတ်ချင်းပြောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာသတိချပ်ကြဘို့လိုပါတယ်။
(ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး “လွမ်းမိသေးတယ်…Hippocrates” ဆိုပြီးဆောင်းပါး၇ှည်တခု ဒီ blog မှာ (health section) မှာေ၇းထားပါတယ်..။